PREZI - MAIMAIMPOANA MAIMAIMPOANA - AHOANA NO HANAOVANA - 2019
Prezi - tolotra iray ahafahana manolotra fampisehoana mahafinaritra
Ny iPhone dia voalohany, ny finday izay mahatonga ny mpampiasa mandefa, mandefa SMS, miasa amin'ny tambajotra sosialy amin'ny alalan'ny Internet. Raha nividy finday vaovao ianao, ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ampidiro karatra SIM.
Fantatrao angamba fa manana karatra samihafa ny karatra SIM. Taona vitsy lasa izay, ny karatra SIM (habaka) (na mini) dia safidy malaza indrindra. Saingy mba hampihenana ny faritra izay hapetraka ao amin'ny iPhone, dia mihena ny format, ary ny androany dia manohana ny habetsahan'ny nano ny modely misy iPhone.
Ny format standa-SIM dia natsangan'ny fitaovana toy ny iPhone, 3G sy 3GS voalohany. Ny modely malaza amin'ny iPhone 4 sy 4S dia nanomboka nasiany fako ho an'ny micro-SIM. Ary amin'ny farany, manomboka amin'ny iPhone 5 amin'ny taranaka farany, Apple dia nifarana tamin'ny lahatsary kely indrindra - nano-SIM.
Ampidiro ny karatra SIM ao amin'ny iPhone
Hatramin'ny am-piandohana, na inona na inona ny format SIM, i Apple dia nitazona ny fitsipika tokana hampidirana karatra ao amin'ny fitaovana. Noho izany, ity fampianarana ity dia azo heverina ho eran'izao tontolo izao.
SIM karatra amin'ny endrika mety (raha ilaina, ankehitriny ny mpitaona finday dia manamboatra azy eo no eo);
Lahatsary manokana izay miaraka amin'ny finday (raha tsy ampy izy, afaka mampiasa rakitra taratasy ianao na tsiranoka);
Mivantana avy hatrany ny iPhone.
Manomboka amin'ny iPhone 4, ny connecter SIM dia eo amin'ny ilany ankavanan'ny telefaona. Ao amin'ireo modely tanora kokoa, eo an-tampon'ny fitaovana izy io.
Soraty eo amin'ny teboka ao amin'ny telefaon ny farany ny farany. Tokony hianjera sy hihiratra ilay toerana.
Alefaso tanteraka ny fitoeran-javatra ary apetraho amin'ny karipetra ny karatra SIM ao aminy - tokony hifanaraka tsara amin'ny toerana.
Ampidiro amin'ny SIM ny finda ary tanteraho tsara izany. Rehefa afaka kelikely, dia tokony hiseho eo amin'ny zoro ambony eo amin'ny efijery ny mpanera.
Raha nanao ny zava-drehetra araka ny torolàlana ianao, fa ny telefaona kosa dia maneho ny hafatra "Tsy misy karatra SIM", jereo izao manaraka izao:
Fanitsiana ny fametrahana ny karatra ao amin'ny smartphone;
Ny fampiasana ny SIM-karatra (indrindra ho an'ireo tranga ireo raha toa ka manapaka ny plastika ianao amin'ny habeny);
Ny fahombiazan'ny telefaona (ny toe-javatra rehefa malemy smartphone ny tenanao dia tsy dia mahazatra loatra - amin'ity tranga ity, na inona na inona karatra hampidirinao ao, dia tsy ho faritana ny mpandraharaha).
Ampidiro karatra SIM ao amin'ny iPhone dia mora - jereo ho anao. Raha manana olana ianao, dia anontanio ireo fanontanianao.